Document sir ah: $4 milyan oo ay lunsatay wasaaradda maaliyadda oo uu Hanti Dhawraha si xeeladeysan u qariyey - Caasimada Online
Home Warar Document sir ah: $4 milyan oo ay lunsatay wasaaradda maaliyadda oo uu...
Document sir ah: $4 milyan oo ay lunsatay wasaaradda maaliyadda oo uu Hanti Dhawraha si xeeladeysan u qariyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Caasimadda Online ayaa heshay Document muujinayo Hanti Dhawraha qaranka Dr. Nur Farah Jimale oo inkiray musuq maasuq uu xafiiskiisa ku qabtay wasaaradda Maaliyadda Xiligii dowladii Waqtigeeda dhamaaday ee Xasan Shikh Maxamuud.
Warbixin ay soo saareen guddiigii ka tirsanaa xafiiska hanta dhawrka ee loo diray inay lasoo xisaabtamaan wasaaradda Maaliyadda ayaa soo saaray warbixin muujineyso in wasaaradda Maaliyadda ay lunsatay lacag ku dhaw ilaa 5 Malyan oo laga soo amaahday Bankiyada Salam iyo Dahabshil.
Xafiiska Hanti dhawrka ayaa bilaabi rabay dacwad ka dhan ah wasaaradda maaliyadda oo lagu heystay lunsashada lacagtaan tirada badan oo aan la ogeyn halka ay ku baxday.
Lacagta lagu heysto wasaaradda Maaliyadda ayaa aheyd lacag 10 Malyan oo Dollar ah taasoo laga soo amaahday Bankiyada Dahabshil iyo Salam Bankiga.
Sida ku cad waraaqaha Document-ga ah oo ay heshay Caasimadda Wasaaradda Maaliyadda ayaa dib bangiyadaas ugu celisay lacag gaareyso ilaa 6 Malyan, sidoo kalana waxay wasaaradda sheegtay inay 10-ka Malyan dib ay u celisay, waxaana ilaa hadda la la’yahay 4 Malyan halka lagu bixiyey iyadoo aan weli la celin lacagtaas amaahda aheyd oo la sheegay in dib loo celiyey.
Markii warbixintaas soo baxday Hanti dhawraha qaran ayaa lacag laaluush ah ka qaatay wasaaradda Maaliyadda xukuumadii Xasan Shiikh Maxamuud, wuxuuna xafiiskiisa kasoo saaray waraaqda hoos kaaga muuqato oo uu ku sheegayo in xisaab xirkii lala galay wasaaradda maaliyadda lagu waayey wax musuq maasuq ah.
Warbixintii koox hantidhowrka guud ka socotaa ka diyaarisay wasaaradda maaliyadda oo lagu muujiyay lunsi lacageed oo ku dhow 5 milyan oo dollar taasoo kuu muujineyso inuu hanta dhawraha u xuub siibtay sidii uu hantida qaranka u lunsan lahaa.
Halkaan hoose waxaad ka arki kartaa waraaqda uu soo saaray xeer ilaaliyaha ee uu ku sheegay inaan wasaaradda Maaliyadda wax musuq maasuq ah lagu helin
Halkaan hoose ka aqriso waraaqadaha Document-ga ah oo ay soo saareyn guddiga xafiiska hanti dhawrka u saartay la xisaabtanka wasaaradda Maaliyadda, waraaqda falaarta gaduudan ay ku qoran tahay ayaa ah midda ugu muhiimsan oo ay ku qoran tahay hantida ay lunsatayay wasaaradda maaliyadda